IIVENKILE EZI-2 ZASECALIFORNIA ZIVALWA EMVA KOKUGUNYAZISWA KWESIXEKO KWI-CORONAVIRUS BUMP - OKUNYE
Iivenkile ezi-2 zaseCalifornia zivalwa emva kokugunyaziswa kwesixeko kwi-coronavirus bump
Iivenkile ezimbini zegrosari eLong Beach ziya kuvalwa ngo-Epreli ukuphendula ivoti yamva nje yeBhunga lesiXeko ukuba igunyazise intlawulo eyongezelelweyo yabasebenzi begrosari phakathi kobhubhane- kwaye abathengi balumkise ukuba lo mkhwa unokuqhubeka…
Iivenkile ezimbini zegrosari eLong Beach ziya kuvala ngo-Epreli ukuphendula ivoti yakutshanje yeBhunga leSixeko ukugunyazisa intlawulo eyongezelelweyo kubasebenzi begrosari phakathi kobhubhani - kwaye abathengi balumkise ukuba lo mkhwa ungaqhubeka kwezinye izixeko ezijonga imigaqo-nkqubo efanayo.
I-Kroger Co., ephethe i-Ralphs kunye ne-Food 4 Less, ibhengeze ngoMvulo, ngoFebruwari 1, ukuba iya kuvala i-Ralphs e-East Long Beach, i-3380 N. Los Coyotes Diagonal, kunye noKutya 4 Okuncinci eNorth Long Beach, i-2185 E. EMzantsi St., ngoAprili 17.
Njengomphumo wesigqibo seSixeko saseLong Beach sokupasa ummiselo ogunyazisa iNtlawulo eyongezelelweyo kubasebenzi begrosari, senze isigqibo esinzima sokuvala ngokusisigxina iindawo zevenkile ezihlala ixesha elide eLong Beach, inkampani yatsho kwingxelo. Esi senzo sigwenxa seBhunga lesiXeko saseLong Beach sigqithisa inkqubo yesithethe sengxoxo kwaye sisebenza kwabanye, kodwa hayi bonke, abasebenzi begrosari esixekweni.
Kwaye kunokwenzeka ukuba uKroger angavala iivenkile ezininzi zegrosari kwenye indawo. ILong Beach yayisisixeko sokuqala kulo mmandla ukuvuma ukuthotywa kwemivuzo okwethutyana kubasebenzi begrosari, kodwa uMontebello uye walandela, kwaye iLos Angeles kunye nePomona batyikitye ukuba baya kuqhubeka nemithetho efanayo.
Xa ebuzwa ukuba ingaba iKroger ingavala na iindawo ezininzi ukuba ezinye izixeko zikwagunyazisa ukuba kuhlawulwe ingozi kubasebenzi begrosari, umlawuli wemicimbi yeRalphs, uJohn Votava, uthe kwi-imeyile, Le miyalelo igwenxa inokubeka nayiphi na ivenkile esokolayo emngciphekweni wokuvalwa.
Ibhunga lesiXeko saseLong Beach liphumeze ngamxhelo mnye lo mthetho kwinyanga ephelileyo, ofuna ukuba iivenkile zokutya zibe nabasebenzi abangama-300 kwilizwe liphela kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-15 eLong Beach ukuba babhatale abasebenzi i-4 yeedola ngeyure njengendlela yokuhlawula okuyingozi ukuqaphela umthwalo wabasebenzi begrosari. ubuso ngobuso phakathi kobhubhani we-coronavirus. Lo mmiselo ngoku umiselwe iintsuku ezili-120.
Kukuqonda (i-Long Beach) ukuba iivenkile ezimbini zichongiwe ngabanini bazo njengexesha elide, isitatimende soMvulo esivela kwisixeko sathi. Isigqibo sikaKroger sibuhlungu kubasebenzi, abathengi kunye nenkampani.
Kwenye indawo eLos Angeles County, iBhunga leSixeko saseMontebello livote kwiveki ephelileyo ukufuna iivenkile ezinkulu zamachiza kunye negrosari ukunika abasebenzi i-$4 eyongezelelweyo ngeyure kwiintsuku ezili-180 ezilandelayo. Umlinganiselo ofanayo wokuhlawula ingozi uya kuqwalaselwa kwakhona liBhunga lesiXeko saseLos Angeles ngoLwesibini, kwaye iPomona kulindeleke ukuba iphonononge umthetho oyilwayo ngoMatshi 1 oya kufuna ukuba iivenkile ezithile zegrosari zibonelele ngentlawulo ye-4 yeedola ngeyure nganye kubasebenzi.
Xa iBhunga lesiXeko saseLong Beach livumile ukunyuswa kwemivuzo, amalungu ebhunga athetha ngendlela abasebenzi begrosari ababubeka ngayo ubomi babo emgceni ukuze baqinisekise ukuba abahlali baseLong Beach bayaqhubeka nokufikelela ekutyeni nakwizinto ezisisiseko abazibonelela ngazo. Amalungu ebhunga kunye noSodolophu uRobert Garcia babhekisele kwinto yokuba uninzi lweevenkile ezithengisa ukutya ngokuzithandela zibonelela ngeentlawulo ezinobungozi kwangethuba kulo bhubhani kodwa zawuphelisa ehlotyeni.
Aba bantu basebenza kwezi marike kwaye ezi venkile zokutya zingamaqhawe, uGarcia uthe kwintlanganiso yebhunga ye-19 kaJanuwari xa ummiselo uvunyiwe. Oku akunto intsha. Baye bafumana olu hlobo lwentlawulo eyongezelelweyo kwixesha elidlulileyo kwaye ukuba babefanele ngaphambili, bafanelwe namhlanje.
Kwaye abasebenzi begrosari ngokwabo bathi ummiselo wesixeko lulungiso oluyimfuneko kwinto yokuba kulo lonke ixesha lengxaki yezempilo yoluntu, baqhubekile nokusebenza kwaye abafumananga mbuyekezo yemali eyaneleyo ngokwenza oko.
UChristina Mejia, osebenzela iFood 4 Less, wayengomnye wabasebenzi abaninzi begrosari abaye babiza iintlanganiso zeBhunga leSixeko ngelixa iqela lalivavanya lo mthetho. Uthe yena kunye noogxa bakhe banexhala mihla le malunga nokuba kunokwenzeka ukubamba i-coronavirus.
Ndiyakholelwa ukuba mna kunye nabo ndisebenza nabo sifanelwe yintlawulo yengozi emva kokuba phantse unyaka wokunyamezela la maxesha anzima, apho le ntsholongwane ithuleyo, ebulalayo iphakathi kwethu, utshilo ngexesha lentlanganiso ye-19 kaJanuwari. Kwiveki ephelileyo kuphela, ivenkile yam ibinabathengi abayi-18,927. Uninzi lwaba bathengi banokuthwala intsholongwane.
Ukuhlawulwa kweengozi akufuneki kube ngumbuzo okanye ingxoxo. Le yinto ebesiyifanele kwasekuqaleni, wongeze watsho uMejia. Ifanele ibe ngabantu ngaphezu kweengeniso, ingabi yingeniso phezu kwabantu.
Isigqibo sokuvala i-25% ye-Ralphs kunye noKutya kwe-4 Iindawo eziNcinane e-Long Beach ayisoso sodwa esisibonileyo isixeko kwisigqibo saso sokudlula lo mmiselo. Umbutho wabathengi baseCalifornia ubhengeze kusuku emva kwevoti yebhunga ukuba ifake isimangalo ngokuchasene nesixeko.
Isimangalo sityhola ukuba ummiselo waseLong Beach awuhambisani nomgaqo-siseko kuba uphazamisana nenkqubo yokuxoxisana phakathi kweevenkile ezithengisa ukutya kunye nemibutho emele abasebenzi bangaphambili. Ukanti esi sixeko sime ngelithi lo mthetho awuphazamisi inkqubo kwaye uyafana nezinye izithintelo zemivuzo ezixhaswe ziinkundla.
Ekulinganiseni imigaqo-nkqubo yabo yokunyusa imivuzo yabasebenzi begrosari ngexesha lo bhubhani, iMontebello, iLos Angeles kunye nePomona bonke baye balunyukiswa nguMbutho weGrosa waseCalifornia ukuba, nabo, banokujongana nemingeni esemthethweni.
Oko akuzange kumthintele uMontebello; USodolophu uKimberly Cobos-Cawthorne ubize ityala kunye nezigrogriso njengeqhinga lokoyikisa, kwaye amanye amalungu ebhunga avumelana naye. Kodwa eLos Angeles, igqwetha lesixeko - elingekawukhuphi umthetho oyilwayo - licele ukuba lo mbandela uxoxwe kwiseshoni evaliweyo ukuphendula isoyikiso sokumangalela. Kwaye ePomona, iinkokeli zesixeko zibeke iliso kwityala laseLong Beach kuba isiphumo sinokuchaphazela ukunyanzeliswa kommiselo kaPomona. Iinkokeli zemanyano yasekhaya, nangona kunjalo, ziyayixhasa imizamo kaPomona yokunyusa intlawulo yabasebenzi begrosari.
Umbutho wabathengi baseCalifornia, okwangoku, uthe ngoMvulo ukuvalwa kweevenkile ezimbini zegrosari eLong Beach sisiphumo sokuqikelelwa komvuzo.
Ukunyuka kwe-$ 4 / iyure kubonisa malunga neepesenti ze-28 zokunyuka kweendleko zabasebenzi kubathengi. Akukho ndlela yokuba abathengi banokufunxa olo nyuso olukhulu lweendleko ngaphandle kokulungiswa kwenye indawo, becinga ukuba iigrocer zisebenza ngencakuba encinci kwaye iivenkile ezininzi sele zisebenza ngombala obomvu, utshilo umongameli wombutho kunye ne-CEO uRon Fong kwingxelo. Ibhunga lesiXeko saseLong Beach labeka ezopolitiko phambi kweentsapho kunye nemisebenzi embindini wobhubhani. Oku kwakuphepheka ngokupheleleyo.
Ingxelo yengeniso ye-Kroger yakutshanje, nangona kunjalo, ibonise ukuba inzuzo yokusebenza kwenkampani inyuke ngama-33% xa kuthelekiswa nonyaka ongaphambili.
Kwaye iSekela likaSodolophu waseLong Beach uRex Richardson uthe wayethandabuza ukuba ukunyuswa kwemivuzo yethutyana yesona sizathu sokuba uKroger agqibe kwelokuba avale iivenkile ezimbini zegrosari, enye yazo - iFood 4 Less - ikwiSithili sesithoba saseRichardson.
Ukutya oku-4 okuncinci kwindawo yaseNorth Long Beach kuye kwanzima kwiminyaka yakutshanje njengoko abathengisi bebhokisi abakhulu abahlanu bavulwe kufutshane, utshilo uRichardson kudliwanondlebe ngoMvulo. Kodwa ngaphandle kokuqiqa, wathi, umsebenzi wakhe kukuqinisekisa ukuba isithili sakhe asihlupheki ngenxa yesigqibo sikaKroger.
Njengelungu lebhunga, andinalo ixesha elininzi lokuhlala phantsi kwaye ndibalise malunga nokuba isigqeba esithile senkampani esenze ibhiliyoni eyongezelelweyo yeedola kulo nyaka uphelileyo, uthe, ukhathazekile malunga nesigqibo seBhunga leSixeko.
Umsebenzi wethu kukugcina ukubonelela abahlali, wongeze watsho uRichardson. Andishukunyiswa.
Ukuza kuthi ga ngoku, uRichardson uthe sele eqalise iingxoxo kunye neSebe loPhuhliso lwezoQoqosho lesixeko kunye nePasifiki Gateway, iarhente yophuhliso lwabasebenzi besixeko, ukumisela amanyathelo alandelayo epropathi kunye nabasebenzi abaza kuchaphazeleka.
Ndicinga nje ukuba kubalulekile ukuba abahlali bazi ukuba ngenye indlela okanye enye, baya kulunga, utshilo. Siza kulunga. Uluntu lwethu luqhubela phambili.
Ababhali babasebenzi uMike Sprague, uElizabeth Chou kunye noJessica Keating baba negalelo kule ngxelo.